Ukubhalisa 1xBet - Indlela yokwenza i-akhawunti 1xBet ukugembula inthanethi - 1xBet TOP
Posted On May 10, 2016 Februwari 19, 2020 ngu admin
Punters ohambisana Club Ukubheja, namuhla sizoxoxa ozakwethu entsha: Ukubhalisa 1xBet. Njengoba kakade, thina nje ubudlelwano ngubhuki omethembayo futhi singakwazi ukuzisebenzisa ngaphandle kokwesaba. Lena enye Isibonelo salokhu.
Ngakho-ke, uma ufuna obhuki (noma ngisho noma ufuna ukwengeza inani amakhaya ekufuneni kwakho inamathuba), Lesi sihloko uyokufundisa indlela ukudala i-akhawunti ku 1xBet.
Ngiyidala kanjani i-akhawunti 1xBet?
ngamafuphi, inqubo yokudala i-akhawunti 1xBet elula, elula futhi kunengqondo. Akukho zihluke kakhulu kulokho, Nokho, wena asetshenziselwa funa lapha. Nokho, ake igxathu negxathu indlela efanele ukuqala ukubhejela 1xBet. ngokushesha? Ngakho woza on!
Sicela uvakashele 1xBet
Ukufinyelela amasayithi 1xBetA Isinyathelo sokuqala ukudalwa i-akhawunti inqubo 1xBet is ngokunengqondo ukufinyelela indawo ekhaya. Ungenza lokhu ngokuchofoza isixhumanisi noma inkinobho Emuva ebhokisini elingezansi.
Ukulandela ulayini obala ukuthi siye bamukela e ozakwethu izambulo, thina ukukumema ukuba ubhalise ekhaya ngokusebenzisa isixhumanisi yethu. ke, wena usizo nokuBheja Club akakhiqizi okuqukethwe mahhala futhi olufanele umphakathi wethu.
Angazi kodwa 1xBet?
Sikumema ukuba uvakashele 1xBet, ubhuki esikuncomela ukubhejela ezemidlalo. Ngaphezu ibhonasi yendabuko abasebenzisi abasha, le ndlu kuhlanganisa uchungechunge lwezenzakalo futhi ine eziningana omoya Championships nge yokusakaza. Chofoza inkinobho engezansi ukuvula i-akhawunti yakho ngaphandle kokuphazamisa ekufundeni kwabo.
Dala i-akhawunti ku 1xBet – Khetha indawo ukudala i-akhawunti entsha ku 1xBet
Ngemva ufinyelela isayithi 1xBet, uzobona ukuthi nomhleli azihlukile kakhulu kusukela ubhuku ngokuthi saxoxa ngaphambili blog yethu. ngokuvamile, kukhona imenyu side nge uhlu ukubhejela ezemidlalo, kulandele i game oluvelele phakathi kwesikrini.
Kuleli qophelo, sifuna ukubonisa ukuthi ukudala i-akhawunti ku 1xBet, ukuze Igxila kwesokudla phezulu. Lapho, uyothola izinkinobho ezimbili ezibalulekile. Esokuqala “Ngena ngemvume” blue. Lapha yilapho bayokwazi ukufinyelela yesikhulumi ngemva udale i-akhawunti.
Uma ungenayo i-akhawunti, inkinobho oyifunayo sesibili, ngokuthi “Register”. Okuvelele ngombala oluhlaza, njengoba kukhonjisiwe esithombeni ngezansi.
Yenza amanothi akho e 1xBet
Ngemva ngokuchofoza inkinobho irekhodi ku-akhawunti yakho, isayithi kuzovula pop-up phakathi kwesikrini, ncamashi like isithombe esilandelayo.
Njengoba ubona, kukhona ezine ongakhetha ngawe ukuze siqale ukudala i-akhawunti 1xBet kukhona. zingabantu:
Nge inombolo yocingo
Nge ukuxhumana nomphakathi
Ake sibone ukuthi ngamunye wabo usebenza.
Chofoza Value: I-akhawunti yakho ngokoqobo okukodwa
Inketho esiwusizo kakhulu ukudala i-akhawunti ku 1xBet ukhetho “Num Chofoza”. Ukhetha izwe lakho futhi lwemali … kwenziwe! Esikrinini esilandelayo, uzothola i Inombolo ye-akhawunti kanye nephasiwedi ngemvume. Ungase futhi ucele ukuba uthumele lolu lwazi ku-i-imeyili, kahle ukuthi siyagcizelela ababenyathelisa olandelayo.
Kususelwa inombolo cell: ukujabulela kudivayisi yakho ukuze udale i-akhawunti yakho
Indlela yesibili ukudala i-akhawunti yakho ku-1xBet usebenzisa inombolo yakho yeselula. Nokho, Lena ngenye indlela elula ukubhalisa emsamo. Vele ufake imininingwane yakho bese uchofoza “umbhalisi” ukuze kuthuthukiswe futhi wamukele ukufinyelela ulwazi.
nge-imeyili: thola idatha ukufinyelela ikheli lakho le-imeyili
Indlela yendabuko kakhulu ukubhalisa kwi website e-mail. E, ecacile, the 1xBet unikeza lesi kungenzeka. lapha, udinga ukugcwalisa idatha yakho, ikakhulukazi nge-e-mail. Inzuzo yalesi imodeli ukuthi ihlanganiswe iphasiwedi yakho ekhethekile ngesikhathi esisodwa. Ukufinyelela idatha uthunyelwa ekhelini lakho, ngokucacile.
zokuxhumana: lula ukuqashelwa lokufinyelela
kwekugcina, khumbula ukuthi usengakwazi ukudala i-akhawunti ku 1xBet ngokusebenzisa ukuxhumana nomphakathi. okwamanje, kukhona ezimbili ongakhetha kukhona: E-Facebook ne-Google Plus. Khetha okukhethwa kukho oyifunayo kufanele ibhekiswe futhi uqinisekise ukufinyelela.
Bona ukuthi kulula kangakanani ukudala i-akhawunti 1xBet?
Njengoba ubona, ukudala i-akhawunti ku 1xBet kuyasebenza kakhulu. ngemuva zonke, unezinketho ezine ezilula ezenza ukuphila kube lula, kokubhalisa kule bookie. Thatha ithuba ibhonasi afika ku-US $ 500 ahlinzekwa abaqalayo ukuqala ukubhejela ezemidlalo.
post Next: 1xBet Hambayo – Landa uhlelo lokusebenza i-Android – iOS
Omunye wacabanga ku "Registo 1xBet – Indlela yokwenza i-akhawunti 1xBet ukugembula inthanethi”
Mr WordPress uthi:
Mashi 14, 2019 ukuze 12:25 am
Sawubona, lena amazwana.
Ukususa amazwana, just log in and view the post's comments. Lapho kuyomelwe inketho hlela noma susa kubo.